ရောင်းမယ် ၊ ဝယ်မယ် ၊ ပြီးရင် စာချုပ်ရုံးကို သွားကြမယ်
### Zawgyi Version ### ကျွန်တော်၏ နေအိမ်သို့ဖုန်းဆက်ပြီးနောက်ရောက်လာသည့် ကျွန်တော့်ဇနီးသည်၏ တူမစုံတွဲအား မြေညီထပ် ကားပါကင်မှပင် စောင့်နေပြီး ရောက်လာကြသည်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိပါရမီ စိန်ဂေဟာ ရှော့ပင်းမောမှ လေးထပ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ဒင်းဆန်းနှင့်...
အိမ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို ကျမ်းကျိန်လွှာဖြင့် လွှဲပြောင်းခွင့် မရှိခြင်း
### Zawgyi Version ### ''အခက်အခဲရှိတိုင်း သူငယ်ချင်းဆီ မကြာခဏလာပြီး အပူကပ်သလို ဖြစ်နေတယ်'' မိတ်ဆွေ တစ်ဦးက စာရေးသူ၏ ရုံးခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး စကားပလ္လင်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ''ရပါတယ် သူငယ်ချင်း၊ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အခုဘာအခက်အခဲတွေ့နေပြန်ပြီလဲ'' စာရေးသူက...
လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
### Zawgyi Version ### ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတာ ဓလေ့တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ် ။ ပုံစံ ၇ ရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တာ တရားဝင်ပါသလား။ လယ်ယာမြေကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်...
အိမ်ခြံမြေတစ်ကွက်ကျော် ရောင်းဘူးဝယ်ဘူးမှ သိမယ်နော်
### Zawgyi Version ### အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုလွင်မိုးကျော်မှာ တစ်ခြားအကျိုးဆောင်များနဲ့မတူဘဲတစ်မူ ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်။ သူ့အကျိုးဆောင်နည်းက ရပ်ကွက်ထဲလှည့်ပြီး အိမ်ရောင်းမည့်သူကို...
အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်လျှင် ဘာတွေလိုအပ်သလဲ၊ ပုံစံစစ်ဆေးခ ဘယ်လောက်ပေးသွင်းရသလဲ ?
### Zawgyi Version ### သုံးထပ်နှင့်အောက် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ၁။ ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ (က) ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ (ခ) အဆောက်အအုံကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာမှ တင်ပြရန် (ဂ)...
### Zawgyi Version ### “ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်ဇနီးမဟုတ်ရင် အမွေရခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ” ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ သားဖြစ်သူက စာရေးသူထံလာရောက်မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “ ဘယ်လိုကိစ္စများရှိနေလို့လဲ ” “ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရောင်းမလားလို့...
အိုးအိမ်မြေ၊ စည်ပင်မြေတို့မှာဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းတွေ ၀ယ်ယူသင့်သလား၊ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?...
### Zawgyi Version ### စည်ပင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့်တိုက်ခန်းအမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိပြီး အိုးအိမ်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့်တိုက်ခန်းအမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါတယ်။စည်ပင်တိုက်ခန်း (၂) မျိုးအနက် ပထမတစ်မျိုးက စည်ပင်တိုက်ခန်းကို ၀ယ်ယူသူအား ပိုင်ဆိုင်မှု...
### Zawgyi Version ### ကျွန်တော်၏ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း ဒေါ်တင်တင်သိမ့်မှ ကမာရွတ်မြို့နယ် ဂျန်းရှင်းစကွဲယားတွင် တွေ့ ဆုံရင်း အကူအညီတောင်းခံလာသည့်ကိစ္စမှာ သူငယ်ချင်းမတစ်ဦးထံမှ သူမ၏အမျိုးသားသဘောမတူသည့် မြေကွက်တစ်ကွက်ကိုဝယ်ယူမိခဲ့ပြီး မဝယ်မှီကလည်း...